သောက်သုံးမယ့်ရေ ကသန့်ပါစေ - Hello Sayarwon
ရေ အသက် တစ်မနက်ပါ။ ရေက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုက အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်တာမျိုးအထိပြင်းထန်ပါတယ်။ ဒါကြောင် နေ့စဉ်တိုင်းမှာ ရေပြည့်ဝအောင်သောက်သုံးဖို့လိုပါမယ်။ ဒီလိုဆိုတာနဲ့ ရေဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး သောက်လိုက်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ရေဆိုတဲ့နေရာမှာ သန့်စင်တဲ့ သောက်သုံးရေဖြစ်ဖို့လိုပါမယ်။
ရေတိုင်းကို သောက်သုံးလို့မဖြစ်ပါဘူး။ သန့်စင်တဲ့ သောက်သုံးရေကသာ ကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံး အကျိုးပြုနိုင်မှာပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ သောက်သုံးရေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင်းဆုံးလည်ပတ်နိုင်စေပြီး ကျန်းမာစေဖို့အတွက် ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါမယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့သောက်သုံးရေကခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘာတွေများလုပ်ပေးလဲချင်ရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အရိုးနုလေးတွေ၊ အဆစ်တွေနဲ့ ကျောရိုးဆစ်လေးတွေထဲမှာ ရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုရေတွေရှိနေတာကပဲ သင့်ကို လိုသလိုလှုပ်ရှားလို့ရအောင် အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနေတာပါ။ တကယ်လို့သင့်အနေနဲ့သာ ရေကိုလုံလောက်အောင်မသောက်လို့ ဒီအရိုးအဆစ်လေးတွေထဲမှာ ရေနည်းသွားမယ်ဆိုရင် အဆစ်တွေကတောင့်တင်းပြီး အဆစ်နာတာ၊ လှုပ်ရှားရအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
တံထွေးက အစာကြေစေပြီး ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ တံထွေးထွက်လာအောင်ထောက်ပံ့ပေးတာက သောက်သုံးလိုက်တဲ့ရေကပါ။ ခံတွင်း၊နှာခေါင်း နဲ့ မျက်လုံးကို အစိုဓာတ်ရစေဖို့လည်း သောက်ရေကအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ရေသောက်တာက ခံတွင်းကျန်းမာစေနိုင်သလို အချိုစာတွေစားတာသောက်တာကြောင့် သွားမပျက်စီးအောင်လည်း အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွေးရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာက ရေပါ။ သွေးကအောက်ဆီဂျင်ကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအနှံ့ကိုပို့ဆောင်ပေးတာပါ။ ဒါကြောင့် ရေသောက်ပေးတာက သွေးစီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဆီကို အောက်ဆီဂျင်စီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေမှာပါ။
ရေဓာတ်မပြည့်ဝလို့ အသားတွေမွဲခြောက်တာက ပြောနေစရာမလိုအောင် သိထားပြီးဖြစ်မျာပါ။ ဒီတော့ အသားအရေကိုရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ဆိုရင် အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်လူးတာထက် ရေသောက်တာကပိုထိရောက်ပါတယ်။ အရေပြားပြဿနာကင်းပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်တာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆို ရေသောက်ပါ။
ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုက ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမွန်ပြီး အတွေးစိတ်ကူးတွေဆန်းသစ်စေဖို့ရေသောက်ပေးပါ။ တွေးရကြပ်လာရင် ရေသောက်လိုက်ပါ။
ရေကို အရေပြားရဲ့အတွင်းလွှာမှာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ပူလာတဲ့အခါ ဒီသိမ်းဆည်းထားတဲ့ ရေတွေက ချွေးအဖြစ်နဲ့ထွက်လာပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အပူလျှပ်တာတွေမဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်လည်း ရေကိုလုံလောက်အောင်သောက်သုံးဖို့လိုပါမယ်။
အူမကြီးကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ ကရေဓာတ်လုံလောက်စွာရရှိဖို့လိုပါမယ်။ တကယ်လို့ရေဓာတ်ပြည့်ဝမှုမရှိတဲ့အခါ အစာအိမ်အက်ဆစ်တွေက ပြင်းနေတာမျိုး၊ အူတွေက အာဟာရစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကျတာနဲ့ ဝမ်းချုပ်တာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရေသောက်နည်းတာက အစာမ​ကြေတာ၊ ရင်ပူတာတွေကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။
ရေက ချွေး၊ ဆီး၊ ဝမ်းတို့ကနေတဆင့် ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းမှာ ရေဓာတ်နည်းတာက သွေးကိုပျစ်စေပြီး သွေးပေါင်ချိန်ကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးတာကိုသက်သာစေပြီး သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိချင်တယ်ဆိုရင် ရေကို လုံလောက်တဲ့ပမာဏရအောင် သောက်ပါ။
ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တဲ့အခါ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတလျှောက်ခြောက်သွေ့မှုတွေဖြစ်ပြီး ဓာတ်မတည့်တာနဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတွေကိုပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရေက အာဟာရဓာတ်တွေကို ပျော်ဝင်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့စီးဆင်းရောက်ရှိမှုကိုကောင်းစေပါတယ်။
ကျောက်ကပ်က ကိုယ်တွင်းအရည်ဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးဖို့ အဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေပါ။ ရေသောက်နည်းတာက ကျောက်ကပ်မှာကျောက်တည်တာအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ကျောက်ကပ်ပြဿနာတွေကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
သင်က ဝိတ်ချနေတာဆိုရင်တော့ ရေ​သောက်ပါလို့ပြောပါရစေ။ အကြောင်းကတော့ ရေသောက်တာက ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်လို့ပါ။ အစားမစားခင်ရေသောက်ခြင်းက အများကြီးမစားမိအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ဗိုက်ပြည့်တယ်လို့လည်း ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
Drinking Water Quality: What You Need to Knowhttps://www.webmd.com/women/safe-drinking-water#1 Accessed Date7February 2020
8 healthful times to drink water, your body will function properlyhttps://www.medclique.org/lifestyle/drink-water-body-function-properly/ Accessed Date7February 2020
Signs You Are Drinking Water Wrong (And5Right Ways of Doing So!)https://www.practo.com/healthfeed/signs-you-are-drinking-water-wrong-and-5-right-ways-of-doing-so-20684/postAccessed Date7February 2020
Drinkung weater https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water#:~:text=Contaminated%20water%20and%20poor%20sanitation,hepatitis%20A%2C%20typhoid%20and%20polio. Accessed Date7February 2020
Does Drinking Water Lower Blood Pressure? https://www.verywellhealth.com/high-blood-pressure-and-water-intake-5203030#:~:text=It’s%20encouraged%20to%20drink%20water,can%20help%20improve%20brain%20function. Accessed Date7February 2020